बहस – Page9– TajaNepal
नेताका पछाडि भारत र चीनका गुप्तचर
विदेशीलाई फाइदा पु¥याउन परिचयपत्र ! काठमाडौँ । नेपालमा नागरिकता ऐन २०२० सालमा लागू भएपछि भारतीय व्यापारी र तिब्बतीयनहरूलाई राजा महेन्द्रबाट नागरिकता दिने हुकुम भएको हो । सोही हुकुमले तिब्बती विद्रोही र भारतीय हजारौँ विद्रोहीले नेपालबाट…
किन जोगाउनुपरेछ प्रमलाई अपराधी ?
भीम रावलको नाता के हो अपराधीसँग ? काठमाडौँ । आखिर सरकारले गठन गरेको छानविन आयोगले पनि केही उपलब्धी प्राप्त गरेन । जब सरकार यसरी कमजोर हुन्छ भने त्यो बेला प्रहरीले नै दबाएको काण्डले कसरी मुक्ति…
लिँदालिँदै डीएसपी झिरिप्पै
बहसOctober 9, 2018
काठमाडौँ । प्रहरी परिसर काठमाडौँमा मात्र होइन, प्रधान कार्यालयले समेत गराउँदा अटेर गर्ने बौद्धका प्रहरी डीएसपी श्यामकुमार राई १ लाख ४८ हजार घूस लिँदालिँदै कार्यालयबाट पक्राउ परी गृहसचिव प्रेमकुमार राईको प्रतिष्ठा बचाइदिएका छन् । जहाँ…
ताकेता गर्दा झाविरुद्ध कान्तिपुर
आर्थिकOctober 9, 2018
५५ करोड किन तिर्दैन युटिएल ! काठमाडौँ । व्यापार नेपालमा गर्ने तर प्राप्त गरेको मुनाफाबाट ६४ अर्ब कर नतिर्ने एनसेल जस्तै बाटो भारतीय कम्पनी युटिएलले खोजेको छ । युटिएलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रू. ५५ करोड नवीकरण…
सशस्त्रमा पनि बढुवाको हलचल
बहसSeptember 25, 2018
प्रम फर्किनासाथ दुवैतिर बढुवा काठमाडौं । अर्ध सैनिक बल सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी बढुवाको लहर चल्दैछ । यस पटक तीन व्याचका एसएसपी पदमा रहेकाहरूले डीआईजी पद पड्काउन दौडधूप गरेका छन् । तर आईजीपी शैलेन्द्र खनालको जोड…
प्रमले ख्याल नगर्दा
काठमाडौँ । कञ्चनपुर घटनामा सोही प्रदेशका प्रहरी डीआईजी सुरज केसी ओझेलमा छन् । त्यहाँ जान जो–कोही प्रहरी मान्दैनन्, कैलालीको टीकापुर घटनापछि भन्दै प्रहरी उम्कन पाउँदैन । अपराधी छाड्न र निर्दोषलाई दोषी करार गर्न निर्मलाको शव…
यति एयरको स्वार्थमा ओलीको समृद्धि
अब वायु सेवा निगम ‘ख’ ग्रासमा ! काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक्लो धरोहर हो समृद्धि र विकास । नेकपाको सरकार हो भनिन्छ । तर सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय न त पार्टीमा छलफल…
आयल निगम पनि सङ्कटमा काठमाडौँ । सरकारले तयारीबिना हात हालेका काम सफल भएन । हल्ला गर्ने, प्रचार खोज्ने तर कानुनी जटिलताका बारेमा चासो नदिने सरकारी शैली उदाङ्गो भएको छ । विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठकै कारण…